Kedu uru nke mgbachi mgbanaka mgbanaka?
Kedu uru nke mgbachi mgbanaka mgbanaka? N'ime afọ ndị na -adịbeghị anya, n'ahịa na -ewu ụlọ nke China, mgbanaka mgbanaka mgbanaka ejirila nwayọọ nwayọọ bụrụ isi ihe owuwu ụlọ, na ihe mkpuchi iko iko ejirila nwayọọ nwayọọ pụọ n'ubi onye ọ bụla ...
Onye na -emepụta ihe nkiri Plywood Face na China.
site na nchịkwa na 21-08-12
A na-akpọkwa plywood ihu ihe nkiri Plywood Face Plywood na plywood formwork plywood. N'isiokwu a, anyị na-ewebata ọtụtụ plywood nwere ihu ihe nkiri nke Sampmax mepụtara na ...
Sampmax Construction bidoro usoro ihe nrụpụta ụdị ọhụụ: Wedge Binding Scaffold
site na nchịkwa na 21-06-04
Sampmax Construction bidoro usoro ihe nrụpụta ihe ọhụrụ: Wedge Binding Scaffold Na June 3, 2021, Sampmax Construction wepụtara ụdị ihe mgbochi agbụ agbụ. E jiri ya tụnyere mgbanaka mgbanaka mgbanaka ...
Aler! "Stagflation" na ahia mba ofesi nwere ike ịda
site na nchịkwa na 21-04-23
Aler! “Stagflation” na azụmaahịa mba ụwa nwere ike ịda mba No.1┃ Ọnụ ahịa akụrụngwa dị egwu kemgbe 2021, ngwa ahịa 'arịgoro' '. Na nkeji iri na ise nke mbụ, ngụkọta nke ngwa ahịa iri itoolu na ise bilitere wee daa na ndepụta ọnụahịa ngwa ahịa. N'ime ha, ngwongwo 79 gụnyere ...
Na Ọwa Suez, Ụgbọ mmiri Nọchiri Anya Ga -ebute Ọganihu Ọhụrụ nke Ụgbọ njem Oké Osimiri？
site na nchịkwa na 21-03-30
Na Machị 23, nnukwu ụgbọ mmiri “Changci” nke Taiwan Evergreen Shipping na -arụ, mgbe ọ na -agafe Ọwa Mmiri Suez, a na -enyo enyo na ọ gbapụrụ na ọwa wee gbarụọ n'ihi oke ifufe. N'elekere 4:30 nke ụtụtụ na 29th, oge mpaghara, site na mbọ otu ndị nnapụta, th ...
Ogo nke ọtụtụ mpempe akwụkwọ plastik ejiri rụọ ọrụ ihe owuwu
site na nchịkwa na 21-03-11
Ọnụ ọgụgụ nke ọtụtụ ihe eji arụ ọrụ plastik eji arụ ọrụ ihe owuwu plastik ahụ nwere ezigbo ihe nwere ihu dị mma, dị larịị ma dị ọcha, b ...
Sampmax agbakwunyere scaffold (ịrị elu ihe mkpuchi) Okwu Mmalite
site na nchịkwa na 21-03-10
Sampmax agbakwunyere scaffold lifting (scaffolding climbing) Okwu Mmalite Mmepe nke ịrị elu ihe mgbakwasị ụkwụ A na -akpọkwa ihe nrụpụta mgbago elu, nke bụ ihe mkpuchi dị na ụlọ ahụ wee ghọta mkpokọta mkpokọta dịka ngwaọrụ ike si dị. Dabere na...
Kedu otu esi achọpụta nchekwa nke arụ ọrụ mgbanaka mgbanaka mgbanaka?
site na nchịkwa na 21-02-06
Kedu otu esi achọpụta nchekwa nke arụ ọrụ mgbanaka mgbanaka mgbanaka? Nke mbu, chọpụta ihe na -emetụta nchekwa nke mgbanaka mgbanaka mgbanaka. Enwere isi ihe atọ: otu bụ nchekwa na ntụkwasị obi nke mgbanaka mgbanaka mgbanaka n'onwe ya, t ...
Ọmụmụ ihe owuwu Sampmax 2020
Ọmụmụ ihe owuwu ụlọ Sampmax 2020 2020 ga -abụ afọ pụrụ iche maka ụlọ ọrụ ihe owuwu ụwa. Industrylọ ọrụ ihe owuwu nwere njirimara nke ọrụ siri ike, ọtụtụ ọrụ ikuku na-agbanwe, na mgbanwe nke saịtị mmepụta n'akụkụ ...
Nlekọta anya maka nnabata usoro ihe nrụpụta ihe
site na nchịkwa na 21-01-21
Nlekọta anya maka ịnabata usoro sistemụ scaffolding: (1) Nabata ntọala na ntọala nke ihe mkpuchi ahụ. Dabere na ụkpụrụ dị mkpa yana ịdị mma nke ala a na -ewu ụlọ, a ga -eme ntọala ntụpọ na iwu ntọala mgbe agbakọọ ...
Sampmax Construction na -enye ihe nrụpụta ihe na ụlọ nrụpụta Dos Bocas
Oghere ịrị elu dabara adaba maka isi ụlọ ahụ karịa mita 45, enwere ike itinye ya n'ọrụ isi ụlọ dị iche iche. Ọ na-anabata usoro nchara niile n'ozuzu ya, yana akụrụngwa agbakwunyere, ihe owuwu dị ala na iji ya dị elu, nchebe zuru oke, ...